डा अनिल श्रेष्ठको तिहार अनुभव : चाउचाउका भरमा ड्युटी गरेको छु :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
आईतबार, फागुन १६, २०७७Sun, Feb 28, 2021
कमला गुरुङ शनिबार, कात्तिक २९, २०७७, १०:५४:००
काठमाडौं- कान्ति बाल अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट बालरोग विशेषज्ञ डा अनिल श्रेष्ठ, जसले यो क्षेत्रमा करिब १४ वर्ष बिताएका छन्। बितेका यो वर्षमा उनले कयौं अनुभव समेत बटुले।
चिकित्सकलाई न त दसैंले छुन्छ, न तिहारले। यसको उदाहरण डा श्रेष्ठ स्वयं हुन्। सबै जना यतिखेर आफ्नो घर परिवारमा तिहार मनाइरहेका छन्। तर उनको यस वर्षको तिहार बिरामीको सेवामै बित्नेछ। यो वर्ष मात्र होइन, उनले गत वर्षको तिहार पनि अस्पतालको ड्युटीमै मनाएका थिए।
उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष तिहारमा मेरो ड्युटी परेको छ। गत वर्षको तिहारमा पनि म अस्पतालमै थिएँ।’
हुन त उनले दसैंमा भने परिवारसँग रमाउने मौका पाएका थिए। उनको घर काठमाडौंको गोंगबुमा छ। बहिनी विदेशमा भएकाले पनि यस वर्षको तिहारमा भाइटीका नरहेको उनी बताउँछन्। यद्यपि लक्ष्मीपूजा गरी मिलेको समय परिवारसँग रमाइलो गरेर तिहार मनाउने उनको योजना छ।
उनले भने, ‘मेरी बहिनी बाहिर छ। त्यसैले यस वर्ष भाइटीका छैन। तर मिलेको समय परिवासँग रमाइलो गरेर तिहार मनाउने योजनामा छु।’
अस्पतालमा अहिले नयाँभन्दा पनि पुराना बिरामी भएकाले पनि तिहारमा ड्युटी केही सहज हुने उनी बताउँछन्। घर नजिकै भएकाले ड्युटी सकेर पनि तिहार मनाइने उनले बताए।
दसैं तिहारमा बिदा नपाउँदा मन खल्लो हुँदैन? भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘सुरुवाती दिनमा निकै नरमाइलो लाग्थ्यो। तर अहिले यही क्षेत्रमा धेरै वर्ष बिताइसकें। त्यसैले होला, अब त सामान्य लाग्छ।’
तिहारसँग सम्बन्धित उनीसँग कयौं तिता–मिठा अनुभव पनि नभएका होइनन्। यतिसम्मकी चाउचाउको भरमा मात्र पनि ड्युटी गरेको अनुभव उनीसँग छ।
‘धेरै वर्षअघिको कुरा हो। कुनै बेला मैले चाउचाउ खाएर मात्र पनि ड्युटी गरेको छु। त्यो बेला अहिले जस्तो सहज थिएन,’ उनले भने।
बिरामीको सेवा सधैं आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन्। अहिले कोरोनाको जोखिम भएकाले पनि सावधानी अपनाउँदै तिहार मनाउन उनको सुझाव छ।
उनले भने, ‘पहिले जसरी धेरै घुलमिल भएर भेटघाट गरी तिहार नमनाएकै राम्रो। हामी अहिले पनि कोरोनाको जोखिममा छौं। त्यसैले सावधानी अपनाउनै पर्छ।’
के हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ? कसरी गर्ने?
फार्मेसी पेशामा धनी र फर्मासिस्ट फरक हुँदा विकृति बढ्यो : रजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेय
कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिलाई किन आवश्यक छ फलोअप परीक्षण?
रुसमा एकैदिनमा साढे ११ हजार सङ्क्रमित ५ घण्टा पहिले
स्वास्थ्य दर्पणले मनायो नवौँ वार्षिकोत्सक ६ घण्टा पहिले
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको दिल्लीमा गरिएको डोटा-नक पेट स्क्यान के हो? ७ घण्टा पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा ८१ संक्रमित थपिए, ४८ जना डिस्चार्ज ८ घण्टा पहिले
शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा आयोगलाई छलेर नियमविपरित बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने केयूको निर्णय ८ घण्टा पहिले
पर्सा : बर्थिङ सेन्टरको स्थापनापछि ग्रामीण महिला खुशी १० घण्टा पहिले
कांग्रेस नेता जोशीको स्वास्थ्यमा सामान्य सुधार १५ घण्टा पहिले
के हो इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ? कसरी गर्ने? १५ घण्टा पहिले
नेपालमा दन्त स्वास्थ्यको अवस्था १७ घण्टा पहिले
आज २३ औं स्वास्थ्य सेवा दिवस १८ घण्टा पहिले
बच्चाले खान मानेन, के गर्ने?आईतबार, फागुन ९, २०७७
सन्तानपछिको यौन जीवन कति सन्तुष्टिपूर्ण? शनिबार, फागुन ८, २०७७
सधैं प्रयोग हुने तर अत्यन्तै हानिकारक यी पाँच सेता खाद्य पदार्थ सोमबार, फागुन १०, २०७७
फार्मेसी पेशामा धनी र फर्मासिस्ट फरक हुँदा विकृति बढ्यो : रजिष्ट्रार संजिव कुमार पाण्डेय बिहिबार, फागुन १३, २०७७
महामारीमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन बिहिबार, माघ २२, २०७७
क्यान्सरका चार स्टेज : कुन स्टेज कति खतरा? बिहिबार, माघ २२, २०७७
शिक्षामन्त्री एवं सिटिइभिटीका उपाध्यक्षलाई खुलापत्र आईतबार, माघ १८, २०७७
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको कति समयपछि काम गर्न थाल्छ? सोमबार, माघ १९, २०७७
ल्याबमा कसरी परीक्षण गरिन्छ, ग्याष्ट्राइटिसको समस्या? सोमबार, माघ २६, २०७७